Ebumnuche 9 Ihe kpatara itinye ego na sọftụwia Ntanetị Ntanetị Bụ Ego Kachasị Mma Maka Ọganihu Azụmaahịa Gị | Martech Zone
Abia na uto azụmaahịa, ojiji nke teknụzụ agaghị ekwe omume!
Site na obere nne na pop ụlọ ahịa na nnukwu ụlọ ọrụ, ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha na itinye ego na teknụzụ na-akwụ nnukwu ụgwọ na ọtụtụ ndị nwe ụlọ ahịa anaghị amata ibu ibu itinye ego na teknụzụ. Ma ịnọ na-aga n'ihu na nkà na ụzụ na ngwanrọ na-aga n'ihu abụghị ọrụ dị mfe. N'ihi ya, ọtụtụ nhọrọ, ọtụtụ nhọrọ…
Invest etinye ego na sọftụwia azụmaahịa ziri ezi maka azụmaahịa gị dị oke mkpa ma bụrụkwa akụkụ dị mkpa nke atụmatụ mmepe ọ bụla. Ma Ntuziaka ahịa software ulo oru abughi banyere "ịba ọgaranya ngwa ngwa." Ọ bụ uru bara uru.
Inye ego na ngwangwa ahịa sọftụwia na teknụzụ bụ maka ịlele azụmaahịa gị na ịbawanye uru karịa ogologo oge. Ma, mgbe nke ahụ na-abịa na ọnụahịa, ọ nwere ike ịdị ala karịa ka ị chere.
You nwere ike, na azụmahịa gị enweghị ike ịkwụ ụgwọ ya?
Gịnị Bụ Ozi Ntuziaka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi?
Onye ọ bụla nwere azụmaahịa nwere nhọrọ ebe na otu esi etinye ego ha. Nke a nwere ike ịbụ ihe ọ bụla site n'ịzụta ngwa ahịa na ndị ọrụ ego, ịzụta akụrụngwa na ngwaahịa ị na-eji azụ ahịa gị. Mana mkpebi nke ebe na mgbe itinye ego nwere ike bụrụ aghụghọ.
N'ime otu afọ, ụlọ ọrụ ndị na-smart smart referral marketing software investments nwere ike ịhụ uto ngwa ngwa na oke uru uru. E nwere ọtụtụ Ntuziaka ngwaahịa software ngwaahịa si n'ebe na pụrụ ime ka ndụ gị na ndụ nke ndị ọrụ gị mfe.
Ndi oru obi uto = eto eto karie!
Na Ntuziaka ahịa software, ọ bụghị ọtụtụ ihe otú ihe ị na-emefu; ọ bụ otu ị si emefu ya. Wantchọrọ ihe kwekọrọ n'echiche nke ụlọ ọrụ gị ma mee ka ọrụ gị dị mfe ma ka mma? Okwesighi ibu nnukwu ego. Ihe niile gbadara ime nhọrọ kacha mma.
“Itinye ego n’ahịa” na sọftụwia ịre ahịa sọsọ pụtara inweta akwụkwọ ikike maka sọftụwia ire ere ahịa dị mkpa maka ịgba ọsọ ahịa kwa ụbọchị, ire ahịa ma ọ bụ arụmọrụ ndị ọzọ nke azụmahịa. A, azụmahịa nwe amalite site ịzụ Ntuziaka ahịa software na ha mkpa ha na-agba ọsọ ahụ azụmahịa mgbe ha na-eche ịzụta ikikere maka "mma nwere" software na a gasịrị ogbo.
Na ikikere na-efu ihe ọ bụla site na ego ole na ole ruo ọtụtụ puku dollar; na ụfọdụ na-enwe otu-apụ na-akwụ ụgwọ, na ndị ọzọ na-eweta a kwa ọnwa ugboro ugboro ụgwọ, ọ dịtụbeghị otú oké mkpa ka itu niile nhọrọ tupu etinye na Ntuziaka ahịa softwares.
Kedụ ka itinye ego na sọftụwia Ntanetị Na-enyere Aka Azụmaahịa?
Ma ị nwere mbido ma ọ bụ onye isi nke ọrụ na-emekọ ihe ọnụ, ọ bụghị mmadụ niile kwenyere na mkpuchi nke itinye ego na ngwanrọ ngwanrọ na-akpali uto azụmahịa na na ọ bụ n'ụzọ doro anya na ndị kasị dịrị nchebe ego maka azụmahịa ọ bụla.
Lee ihe kpatara iteghete dika Kirsty McAdam; Onye guzobere na onye isi oche nke onye ndu ngwanrọ ngwanrọ, Ntuziaka Factory onye kesara ihe kpatara itinye ego na sọftụwia azụmaahịa kachasị mma bụ ihe kachasị mma ị ga - eme maka azụmaahịa azụmaahịa gị na atụmatụ azụmaahịa gị.
Gụọ Martech ZoneNkeji edemede gbasara Ntuziaka Factory
Ihe Mere 1: Nọrọ n'Ihu nke Ozi Ntuziaka
Otu uru kachasị mma ị nwere ike ịnwe dịka ụlọ ọrụ na-anọ n'ihu ndị asọmpi gị yana ụzọ kachasị mfe iji mezuo nke a bụ site na ịnweta nke kachasị dị elu ma dị mfe iji sọftụwia azụmaahịa iji rụọ ọrụ azụmahịa gị. Ọ ka mma na azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa gị na-eji ya, obere ọrụ aka ndị otu ga-emezu.
Nke a pụtara na ha nwere oge iji rụọ ọrụ na ọrụ ndị ọzọ dị oke mkpa dị ka iso ndị ahịa na-arụ ọrụ na ire ahịa. Mgbe ị nwere teknụzụ kachasị ọhụrụ, ị ga-enwekwa ụzọ ọhụụ ọhụụ karịa ụlọ ọrụ ndị ọzọ - ma ọ bụ site na usoro ahịa ọgbara ọhụrụ, usoro siri ike karị, ma ọ bụ mmepụta arụmọrụ.
Inweta nkwado na asọmpi a pụtara na azụmahịa gị ga-adọta ọtụtụ ndị ahịa ma bulie ego gị. Cheedị banyere oge nke netwọk mmekọrịta butere usoro mgbasa ozi ha. Ndị na-amalite ịmalite (iji sọftụwia smart iji wepụta ọtụtụ puku mgbasa ozi nye ndị na-ege ha ntị) gweriri asọmpi ha.
Ihe Mere 2: Nkwado Ntuziaka Ka Mma
Inwe usoro ngwanrọ kachasị mma na-egosi na ị na-azụ ahịa gị nke ọma. Inye usoro ngwanrọ ntughari ohuru nwere ike ibido ihe ojoo na ihe mgbu na-eto eto, ma ozugbo i wuru, ahia gi ga eto. Na mmechi, ajụjụ ị kwesịrị ịjụ onwe gị dịka onye ọchụnta ego bụ nke a;
“Mmadu aghaghi ime ihe a?”
Ọtụtụ mgbe, anyị na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ ịrụ ọrụ siri ike ma na-agwụ ike, naanị n'ihi na o yiri ka ọ bụ ụzọ mgbochi kachasị nta. Ma nke abụọ anyị na-amalite nyocha azịza maka ọrụ azụmaahịa ndị a, anyị na-ahụ na ọtụtụ n'ime ha nwere ike na-akpaghị aka maka obere ihe na-efu. Nke a na - enye ohere ka akụ na ụba mmadụ anyị lekwasị anya na ọrụ ntinye aka na - enweghị ike ịrụ ọrụ.
Ndị ọrụ na-ere ahịa nke ọma na-arụ ọrụ nke ọma, na, n'elu ihe ọ bụla ọzọ, na-enwe obi ụtọ karịa na-ekenyeghị ọrụ ụwa. Site na ịzụta ngwa ahịa azụmaahịa ziri ezi, ị ga - achọpụta n'oge na - adịghị anya na ha na - ewepụta mmelite mgbasa ozi gbasara ozi. A na - ewetara mmelite sọftụwia iji mee ka ọrụ rụọ ọrụ nke ọma, webata atụmatụ ọhụrụ, ma melite ahụmịhe onye ọrụ n'ozuzu (UX).
Na ngwụcha, mmelite ngwanrọ ga-agbago na gbadaa ndị isi azụmaahịa gị, na-eme ka azụmahịa gị na-aga were were na ọsọ ọsọ. Dika usoro ahia Ntuziaka na-esiwanye ike, ikike nke ngwaahịa ma obu oru na-eto eto na-agbasakwa. Na ịme azụmaahịa na-arụ ọrụ nke ọma, ị mepụtara ohere karịa maka ụlọ ọrụ gị iji zute ihe ndị ahịa chọrọ.
Kasị mma ị nwere ike ijere ndị ahịa gị na niche ozi; ndị ahịa ga-enwe obi ụtọ karịa ma ndị mmadụ ga-ekwukwa banyere gị. Na mmechi, imeputa njiri ozi mbu ahia na akari oke nke njehie na mmeputa na oru, na eme ka ahia gi nwekwuo ego site na imezu mmezu.
Reason 3: Offer A Tangible Platform for Referral Marketing Uto
Etinye ego na ngughari ahia ngwanrọ bu mkpebi siri ike nke n’enye ahia. Mgbe ịmalite azụmahịa - na ụlọ ọrụ ọ bụla - ị na-amalite obere. Olileanya bụ na ị ga-etolite na-akaghị aka, ma ọnụ ọgụgụ ndị ahịa na ego nke ụlọ ọrụ n'onwe ya. Ọ dịghị ubi ọzọ gbasaa dị ka teknụzụ.
Mgbe ị na-ekpebi ihe ị ga-etinye na azụmaahịa gị, tụlee ihe ga - enyere ya aka ito eto ma na - aga n’ihu. Site na itinye ego na sọftụwia azụmaahịa ntughari, ị na-etinye ego na ikike nke ngwanrọ azụmaahịa azụmaahịa na ụlọ ọrụ gị.
Reason 4: Nweta Ogologo Ogologo Ogologo Site na Nnabata Oge Dị mkpirikpi
Mgbe ị na-etinye ego na sọftụwia ire ahịa, ị na-etinye ego maka azụmaahịa gị ogologo oge. Ihe dị ukwuu banyere itinye ego na sọftụwia ire ere ahịa bụ na uru ya nwere ike ịdịru afọ. Dị ka ngwanrọ nke atọ ị tinyere na ya na-arụ ọrụ na arụmọrụ, ọ na-eto na uru na ogologo ndụ.
Ọ bụ ezie na teknụzụ abụghịrịrị ụlọ ọrụ kwụsiri ike, ọ bụ nke na-eto mgbe niile. Itinye ego na sọftụwia na - edozi usoro azụmaahịa gị anaghị abụ mkpebi na - ezighi ezi.
Etinye ego na ntinye aka na ngwanrọ sọftụwia sọftụwia - yingzụ ihe n’ime Ntuziaka software ngosiputa ahia ma ọ bụ SaaS pụtara na ị na-atọ ntọala maka ọganiihu azụmahịa gị. Ego ị na-eji ugbu a ga-abawanye uru ka azụmaahịa gị na-erite uru site na ntinye ego.
N'ihe atụ, ntinye ego ị na-eme maka otu afọ n'ime mmemme ngwanrọ na-ezigara ma ọ bụ SaaS nwere ike ị nweta oke uru karịa itinye ego na onye ọrụ na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ gị ihe na-erughị otu afọ. Mgbanwe ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ dị ukwuu metụtara ya. Site na sọftụwia ire ere, nke ahụ abụghị nsogbu.
Reason 5: Mee ka njigide ndị ahịa dị mma
Site na itinye ego na sọftụwia ire ahịa, ị nwere ike ịghọta nnukwu mmelite na nkwukọrịta ahịa azụmaahịa. N'ihi usoro arụpụtara ya, sọftụwia azụmaahịa na-eme ka nkwukọrịta ka mma maka ndị ahịa.
Ma ọ bụ site na ozi-e ma ọ bụ mgbasa ozi mmekọrịta, itinye ego na sọftụwia ire ahịa na-enye gị ụzọ ndị ọzọ iji rute ndị na-ege gị ntị. N’aka nke ya, azụmaahịa gị nwere ike ime nke ọma site na ịzụlite na ịzụlite mmekọrịta dị mma na ndị ahịa ugbu a na ndị nwere ike. Usoro ntinye aka nke software na-enye ohere iji melite mmekorita ahia.
Y’oburu n’inwe ihe nlere banyere itinye aka na ahia banyere ihe banyere ahia ahia gi, gi na ndi kompeni ichoro inwe mmekorita ha. Likely nwekwara ike ijikọ ma kpakọrịta na azụmaahịa ndị ọzọ na-eji otu teknụzụ ma ọ bụ nke yiri ya.
Azụmaahịa gbasara mmekọrịta bara uru na-achọta ụzọ na ịgbasa ma gbasawanye. Ọ bụrụ na ijikọ njikọ ndị ahụ maka ọdịmma gị, ụlọ ọrụ abụọ ahụ nwere ike ịhụ oke uto na ihe ọhụrụ. Site na otu mkpebi ego, ịnwere ike imeghe ọnụ ụzọ gị maka njikọ njikọ ọhụrụ niile ndị na-anọghị na tebụl tupu oge ahụ.
Reason 6: Dịkwuo gị arụpụta
Tinyere arụmọrụ, njikwa ngwanrọ ziri ezi nwere ike ịbawanye arụmọrụ. Nke a bụ eziokwu ma ọ bụrụ na sọftụwia nzipu ozi ntinye ego ị na-eme ka ọ dị mfe SOPs gị ugbu a ma sụgharịa usoro azụmaahịa ụfọdụ na - arụ ọrụ. Dabere na ngwanrọ azụmaahịa ị na-ahọrọ itinye ego na ya, ị nwere ike me ka arụmọrụ nke sistemụ gị na ndị ọrụ gị dịkwuo mma.
Otu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na-arụpụta na nnukwu olu, na -enweghị mmejọ mmadụ. Azụmaahịa gị nwekwara ike iji sọftụwia ire ahịa iji hazie ọrụ ma belata oge ọ ga-eji mezue ebumnuche ndị ọzọ. Site na ngwanrọ ngwanrọ nke izizi ziri ezi, ịnwere ike ịnyefe ọrụ iji jide n'aka na arụ ọrụ ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma.
N'ikpeazụ, ị na-azụghachi oge onye ọrụ gị, ma na-enye ha oge ka ukwuu iji rụpụta ọrụ na ịmalite ọrụ ọhụụ.
Reason 7: Access ka Mma Nchebe
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-atụ egwu iyi egwu ma ọ bụ iyi egwu cyber yana ezigbo ihe kpatara ya. Nkà na ụzụ na-eme ka ụjọ ndị a dị adị. O siri ike otu ụbọchị ịgafe na-enweghị akụkọ banyere ụfọdụ mbanye anataghị ikike ọhụrụ. N'ụzọ dị ịtụnanya, sọftụwia kachasị mma (naanị ya?) Agbachitere.
Mgbe ị na-eji sọftụwia kachasị ọhụrụ, nke enyere ikikere ma ọ bụ nke SaaS nke atọ iji jikwaa arụmọrụ gị kwa ụbọchị, ụlọ ọrụ gị na-arụ ọrụ na nchekwa na isi ya. Companieslọ ọrụ ngwanrọ ndị na-ere ahịa ị na-etinye ntụkwasị obi gị, ị kwesịrị ịtụkwasị ntụkwasị obi ahụ obi. Aha ha dabere na ịdebe data gị; na data nke ndị ahịa gị.
Ọ bụ naanị ụzọ ọzọ nke itinye ego na sọftụwia azụmaahịa na-eme ka uche dị ka mkpebi dị ogologo oge. Na-agbasawanye ụlọ ọrụ gị ka ị na-echekwa akụ gị, echiche, na data ndị ahịa gị. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọnụahịa maka ụfọdụ ngwaahịa ngwanrọ ngwanrọ ngwaahịa yiri ka ọ dị elu, ọ bara uru itinye ego ma ọ bụrụ na ọ pụtara nchedo. Ọtụtụ mgbe, itinye ego na sọftụwia azụmaahịa ziri ezi nwere ike ịme ma ọ bụ mebie azụmahịa.
Azụmaahịa ọ bụla aghaghi ime ihe kwesịrị ekwesị iji chekwaa ozi nzuzo ha na-echekwa. Itinye ego na sistemụ nke na-echekwa data ndị ahịa nwere nsogbu abụghị naanị ụzọ iji belata ihe egwu nke ngabiga data, mana ọ nwekwara ike ịbụ ebe ere mgbe ị na-akwalite azụmahịa gị na ndị ahịa.
Reason 8: Mma ahịa
Kedu ihe na - enye azụmaahịa gị uto kachasị, yana ma ọ bụ na - enweghị sọftụwia ahụ?
Ezi ahịa Ntuziaka.
Ihe kachasị mma na teknụzụ bụ uru ọ na-enye ma ọ bụrụ na ọ gbasara ahịa ntugharị. Site na mgbasa ozi mgbasa ozi na mgbasa ozi na mgbasa ozi, ọrụ sọftụwia na-ere ahịa na-enyere gị aka ịgbasa okwu ma kpalite mmata banyere azụmahịa gị ngwa ngwa.
Ọtụtụ puku ndị ọrụ ahịa na-ere ahịa na-eji ọtụtụ puku ndị ọrụ iji jikwaa ma chịkwaa usoro ịzụ ahịa ha. Site na itinye ego na mmemme azụmaahịa ntụgharị dị ka ndị a, ị nwere ike ịhazi mbọ ị na - agba iji nweta ọpụrụiche ị na - eme n’iru gị.
Reason 9: Mepee New ụzọ
Site na teknụzụ ọhụụ abịa ọhụụ ọhụụ. Ihe niile ruo ebe a kwuru ohere maka uto na mmepe. Nke ahụ bụ eziokwu.
Teknụzụ meghere ụzọ ị nwere ike icheghị na ọ ga-ekwe omume maka azụmaahịa gị. Ndị ụlọ ọrụ na-etolite etolite etolite etolite nwere ike irite uru site na itinye ego na ntinye akwụkwọ ngwanrọ ntugharị ọhụụ na ndị na-agbanwe ihe na-emepụta ha.
Enweghị itinye ego na sọftụwia ire ahịa, ụlọ ọrụ gị nwere ike ịkwụsị ka sistemụ ga - abụ ihe mgbe ochie, ndị ahịa na - ahapụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, ma ọ bụ ndị otu egwuregwu akwụsịla n'ihi nhazi.
Nke a bụ eziokwu; naanị ụlọ ọrụ na ngwaahịa na-agbanwe nwere ike ịlanarị elu na ala nke akụ na ụba ụwa. Mgbe ị na - eji ego azụmaahịa gị eme nhọrọ na - aga n’ihu, ị ga - achọpụta na azụmaahịa gị agaghị adịgide; ọ ga na-eto. Enweghị ntinye ego ngwanrọ ngwanrọ, ụlọ ọrụ gị ga-ada n'ihi na ọ gaghị enwe ike itolite.
Etinye ego di na azumahia obula. Dịka onye nwe azụmaahịa ma ọ bụ CEO, ị kpebiri ebe ego gị ga-aga. Naanị otu ụzọ azụmaahịa si eto bụ mgbe nnyeghachi bụ isi ụkpụrụ.
Ga-emerịrị ụkpụrụ a nke iji nweta ohere ị ga-eji na-eme mkpebi gị; nke bụ isi mgbe ị na-etinye ego na sọftụwia ire ahịa. Ka ịlaghachi na mbadamba ịbịaru maka mmalite nke afọ ọhụrụ azụmaahịa, tụlee ụdị ntinye ntinye ngwanrọ ị na-eme maka ịkwalite azụmaahịa gị.
Ma nke ahụ pụtara obere Software dị ka Ọrụ (SaaS) zụrụ iji meziwanye sistemụ gị ma ọ bụ itinye ego na mmekọrịta ogologo oge na ụlọ ọrụ ngwanrọ na-ere ahịa, ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha na enweghị oge dịka ugbu a ịjụ ajụjụ siri ike. Ozugbo ị kọwapụtara ebe itinye ego gị kwesịrị ịga, ọ bụ oge iji mee ya.
Gbalịa Ntuziaka Ntuziaka n'efu
Ngosipụta: Edemede a gụnyere njikọ mmekọ Ntuziaka Factory.
Tags: MgbakwunyeNtuziaka ụlọ ọrụahịa ahịaNtuziaka ahia ahiaNtuziaka iheụzọ ntinye aka